မင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပြီ
မင်းကိုနိုင် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပြီ
Posted by chatsu on Jan 13, 2012 in Copy/Paste | 25 comments
မင်းခြံထောင်မှ ၁၃ ဦးတွင် ၁၃ ဦးလုံး လွှတ်
သစ်ထူးလွင် 1/13/2012 08:50:00 AM ShareThis
တတိယအကြိမ်မြောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး ၁၀ ရက်အကြာ အကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦးအား ထပ်မံလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပါကြောင်း
မြင်းခြံထောင်မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ မထက်ထက်အောင် အပါအ၀င် ၁၂ ဦး လွှတ်မြောက်လာသည်ဟု သိရသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရ မြောင်မြထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးပါက ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မဂ္ဂင်ကျောင်းတွင် ရဟန်းခံမည်ဖြစ်ကြောင်း အရှင် ဂမ္ဘီရ၏မိခင် ဒေါ်ရေးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အရှင်ဂမ္ဘီရ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာ (၄) တွင် အဖမ်းခံရပြီး ပုဒ်မ (၁၇)ခုဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၆၈)နှစ်ကျခံထားရသူဖြစ်သည်။
ဘူးသီတောင်အကျဉ်းထောင်မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရသူများဖြစ်ကြသည့် ကိုစည်သူမောင်၊ ကိုသန့်ဇင်မျိုး၊ ကိုကျော်မင်း၊ ကိုထွန်းညို၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုအောင်ဇော်ဦး၊ ကိုပြေကျော်၊ ကိုဝဏ္ဏပံသ၊ ကိုကျော်ဝင်းဆန်း၊ ကိုမောင်မောင်လတ်တို့သည် ယနေ့နံနက် ၇ နာရီတွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
စစ်တွေအကျဉ်ထောင်မှ နံနက် ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ်တွင် အကျဉ်သား စုစုပေါင်း (၁၇) ဦးလွတ်မြောက်ပြီး ထိုအထဲတွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံရသူ (၈) ဦးပါဝင်ကြောင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါ (၈) ဦးမှာ ဒေါက်တာသက်လွင်၊ ကိုသန်းတင်(ခ)ကိုကြီးသန်း၊ ပြည့်ဖြိုးလှိုင်၊ အောင်အောင်ကျော်(ဧရာဝတီ)၊ ဇေယျာဦး(ဧရာဝတီ)၊ ဦးပုရစ်၊ ကျော်ဇင်ဝင်း၊ ဒေါပုံနေနေ တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
စစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံရသူ ၁၀ ဦးအနက် ၉ ဦး နှင့် ဘူးသီးတောင်အကျဉ်းထောင်မှ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံရသူ ၁၀ ဦးအနက် ၉ ဦး လွတ်မြောက်မည်ဖြစ်ပြီး ဘူးသီးထောင်အကျဉ်းထောင်မှ ကိုဌေးကြွယ်၊ ဦးထွန်းညို၊ ဦးပြည်ကျော် တို့ပါဝင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထို့အတူ စစ်တွေထောင်မှ ဒေါက်တာသက်လွင်၊ ကိုသန်းတင်(ခ)ကိုကြီးသန်း၊ ပြည့်ဖြိုးလှိုင်၊ အောင်အောင်ကျော်(ဧရာဝတီ)၊ ဇေယျာဦး(ဧရာဝတီ)၊ ဦးပုရစ် တို့လည်း လွတ်မြောက်မည်ဟု သိရှိရသည်
မနေ့ကတည်းက လွတ်မယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေများ ပါမလဲလို့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ဒီနေ့မနက် အင်တာနက်ဆိုင်အပြေးဖွင့်ကြည့်ပြီး နံမည်ကြီးတော်တော်များများပါလာလို့
ရွာသားတို့အတွက် ထူးမယ်ထင်ပြီး စည်းကမ်းဖောက်ပြီး ကော်ပီလုပ်တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ
ကြားရတဲ့သတင်းက နားဝင်ချိုလိုက်တာ…. လေးလေးလည်း လွတ်ပြီဆိုတော့ အဘွား အတွက် ရင်အေးစရာ အတော့်ကို ကောင်းသလို တို့ရဲ့ ရဲဘော်ကြီး နေဘုန်းလတ်လည်း ပါတယ်ဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုနေ့ထပ်လွှတ်ပေးမယ်လို့လည်း ကြားနေတယ်။
ပြောမပြတတ်လောက်အောင်ဝမ်းသာပါတယ်။ တချို့ကလဲအခုမှလွှတ်လို့ သမတကြီးကိုအကောင်း မမြင်ကြသူတွေရှိပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုလွှတ်လိုက်တာကိုပဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ အစိုးရသစ်သက်တန်း ၁ နှစ်မပြည့်ခင်မှာထူးခြားတာတွေ၊ မမျှော်လင့်နိုင်၊မမျှော်မှန်းနိုင်ခဲ့တာတွေဖြစ် လာလို့ဘယ်သူဘယ်လိုပြောပြောကျွန်မကတော့ သမတကြီးကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မှာပါ။ တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့မှာပါ။ သူရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ဝိုင်းကူလုပ်မှာပါ။ ရှေ့ဆက်လုပ်ကြမယ့်အလုပ်တွေကို လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အလှဆုံးဖြစ်အောင် နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံးရေးခဲ့ပြီ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကောင်းစိတ်ဓါတ် အကျင့်ကောင်းတွေကို နောက်လူငယ်တွေကို ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေခဲ့မယ်။ အခုပြန်လာတာဟာ ဒေါင်းတွေက အိုးဝေသံပေးပြီး ပြန်လာတာပါ။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီမိ်ုကရေစီအရေးတွေကို အားနဲ့ ခွန်နဲ့ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ အခုကျွန်တော်ဘုရာဖူးဦးမှာပါ။ ပါတီအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော်မစဉ်စားထားပါဘူး၊ သို့သော်လည်း ပါတီလုပ်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကပဲလုပ်လုပ်ပါ၊ အပြင်ကလုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ကတည်းက ပါတီအနေနဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက်တော့အစီအစဉ်မရှိဘူး။သို့သော် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တော့ ရှိသမျှအားနဲ့ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်သွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLDနဲ့ကတော့ အရင်လိုပါပဲ။ လက်တွဲတော့မပျက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ၀င်ဖို့ မ၀င်ဖို့သာ ရှိပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေအနေနဲ့ လူကြီးတွေကို ပြန်ပြောပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ပါတယ်လို့။ Eleven ကရောပါလားမသိဘူး။ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်ကိုပြောပေးပါဗျာ ကျွန်တော်တို့် ၁ ခြောက်လုံး အခွေကြည့်ရတယ်လို့ Congratulation လုပ်လိုက်ပါနော်။ Appreciate လုပ်ပါတယ်လို့ ” ဟု သရက်ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ကိုမင်းကိုနိုင်မှ သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်
အမေစု၊ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကို ကိုကိုကြီး၊ ကိုဋ္ဌေးကြွယ်၊ ဦးခင်ညွန့် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း)၊ ဇာဂနာနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ပေါင်းလိုက်မိပြီဆိုလို့ကတော့မြန်မာပြည်ရှေ့ရေး စိတ်အေးရပါပြီ။
A lot of thanks to President U Thein Sein.
တိုင်းပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲ တကယ်ဖြစ်တော့မှာပါလား။မ မမြင်တွေ့ လိုက်ရဘဲ
သေသွားကြတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် သာဓုခေါ်ပါရစေ
၀မ်းသာပါတယ်ဗျိူ့။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။
ဒီနှစ်ရဲ့ နှစ်ဦးမှာ ဒီလို မင်္ဂလာသတင်းကြားရလို့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာရပါတယ်
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံသန်းနိုင်ကြပြီဖြစ်လို့ …
လွတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းသာတာ ကျွှန်တော်တို့ ရဲ့ကြင်နာမှုပါ လွတ်လာသူအတွက်က အောင်ပွဲခံစရာမဟုတ်ပါဘူး နဂိုရ်ထဲက
မတရား ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရမှုတွေရဲ့စိတ် ဖိဆီးခံခဲ့ရမှုနဲ့ ပျော်ရွင်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်မှာလဲလို့ တစ်သက်လုံးမေးနေရမဲ့+ အဖြစ်တွေကို ရွှေကြီး(အာဏာရူးကြီး)သိပါစေ.မသေပါစေနဲ့ အုံးဗျာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျိန်ဆဲသံကို နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြားနေပါစေအုံးဗျာ။
အော် …ကိုခင်ညွှန့် ၊၊၊၊။။ N.L.D ကို အာဏာမပေးရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ခဲ့ပြီး ခုဒေါ်စုရဲ့( no body can stop her) ဘယ်သူမှရပ်တန့် လို့ မရဖြစ်တော့မှ ဒေါ်စုအလုပ်တွေ ၀ိုင်းကူလုပ်မယ်တဲ့ ဘူးသီးသီးမှအ ရည်းတော်ချင်တဲ့သူ
သောက်ခွက်ပြောင်လွန့်းပါတဲ့ အာဏာရူးဟောင်းရယ် အံ့ရော….အံ့ရော..အံ့ရော……………………………
ဒေါ်စုရေ ခါးမှာသေနတ်ချိတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘ၀ထိ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးပွဲထွက်တတ်တဲ့ အခြောက်ကြီးကိုမယုံပါလေပါနဲ.
ဒီနေ့လောက် ကျက်သရေမင်္ဂအပေါင်းနဲ့ပြည်စုံတာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်၊၀မ်းသာလွန်းလို့မျက်ရည်များတောင် လည်ရှာတယ်…သီချင်းဆိုရမလိုပါပဲဗျာ…နောက်ထပ်ကျန်ရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ…ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အတူ ကိုမြအေး၊အရှင်ဂမ္ဘီရ၊နေဘုန်းလတ်၊ကိုကိုကြီး၊ကိုဌေးကြွယ်စတဲ့ ရဲရင့်တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာ အင်မတန်မင်္ဂရှိတဲ့သတင်းပါပဲဗျာ..
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဗျာ…
ယခုလို စေတနာထားပေးတဲ့ သမတကြီးဦးသိန်းစိန်လည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ….
ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ … ကြားရတဲ့သတင်း မင်္ဂလာရှိလိုက်တာဗျို့ … ။
ဒီနေ့ သတင်းတွေ အတွက် အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။
ဒီလိုနေ့မျိုး ဒီလိုသတင်းမျိုး စောင်စားနေရတာ ကြာပါပြီဗျာ
အရမ်းဝမ်းသာမိနေတယ် ဘဘဦးခင်ညွှန် လွှတ်လာလို့ပါ ကျန်နေသူအားလုံးလည်းအမြန်ဆုံးလွှတ်လာပါစေ
အရမ်းဝမ်းသာမိနေတယ် ဘဘဦးခင်ညွှန့် လွှတ်လာလို့ပါ ကျန်နေသူအားလုံးလည်းအမြန်ဆုံးလွှတ်လာပါစေ
အရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ ကိုအံ့ဖွယ်ကျော်ရဲ့ သတင်းလေးရရင်လဲ တင်ပေးကြပါဦးနော်။